Ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana : Nanome baiko hentitra ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaAdy amin’ny tsy fandriam-pahalemana : Nanome baiko hentitra ny Filoha
Tsy nitsahatra nanome baiko hentitra tamin’ireo minisitra tompon’andraikitry ny Filaminana eto amin’ny tany sy ny fanjakana dia ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, mba hanamafy ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana. Adidin’ny fanjakana ny miady amin’ny tsy fandriam-pahalemana ka efa nisy ny fepetra noraisina tahaka ny fananganana ny « task force » hiady amin’izany.
Manoloana ny hetsika izay hataon’ireo fiarahamonina sivily mikasika ilay hetsika « Aoka Izay », izay kasain’izy ireo hatao amin’ny alakamisy faha-15 marsa izao amin’ny 12 ora antoandro hatramin’ny 12 ora sy 5 minitra, dia nametraka fanontaniana mahatonga saina ny tsirairay ny Filoha, nandritry ny Filankevitry ny Minisitra farany teo hoe fa « tena izany hetsika izany tokoa ve no hahafongotra an’io tsy fandriam-pahalemana io ? »
Tsia ny valiny. Ilaina tetikady matipaika ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana. Isan’izany io “task force” manokana efa natsangan’ny fitondram-panjakana io. Ireny efa hita ireny ny vokatra. Ny tetikady mivaingana toa itony hataon’ny fitondrana foibe itony ihany no mampijanona haingana an’io tsy fandriam-pahalemana io fa tsy ny fanaovana hetsika mipoapoaka tahaka io kasain’ny sasany hatao io. Eo ihany koa ny fifanomezan-tanan’ny vahoaka amin’ny mpitandro filaminana amin’ny fanomezam-baovao. Any anaty fiarahamonina any ihany mantsy ny mpanao ratsy, ka ny vahoaka ihany dia efa afaka manondro azy ireo.
Zava-dehibe ny fanentanana ny vahoaka hifanome tanana amin’ny mpitandro filaminana, hoy ny Filoha, nandritra an’io filankevitry ny minisitra farany io, ka tokony hatevenina sy hamafisina izany.
Fa isan’ny teboka faharoa notsindrian’ny Filoha tamin’ny filankevitry ny Minisitra farany teo koa ny famahana haingana ny olan’ny eo anivon’ny Seranan-tsambon’i Toamasina. Nanome baiko hentitra an’ireo minisitra voakasik’izany ny tenany. Maromaro ny minisitra voakasik’izany toa ny minisitry ny Fitaterana, ny minisitry ny Vola sy ny tetibola, ny minisitry ny Varotra ….
Nazava io baiko hentitra nomen’ny filoha io. Tokony hanao ny fomba rehetra hamahana haingana io olan’ny Seranan-tsambon’i Toamasina io ireo minisitra voakasik’ireo.
Teboka farany nasian’ny filoha teny ihany koa ny mikasika ny fifehezana ny valanaretina pesta. Nanome baiko hentitra ny minisitra voakasik’izany izy, dia ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny minisitry ny Rano sy ny Fidiovana mba hanohy ny fanentanana ny vahoaka hanadio ny manodidina azy mba hamongorana tanteraka ny valanaretina pesta.